गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा २०८ औं भानु जयन्ती | eAdarsha.com
पोखरा । गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पहिलो कार्यक्रमका रूपमा नेपाली साहित्यका जरो मानिने आदिकवि भानुभक्त आचार्यको २०८ औं जन्मजयन्ती मनाएको छ ।
प्रतिष्ठानले विद्वत प्रवचन, धनुमा कवितावाचन र सम्मानसहित विविध कार्यक्रमका साथ जयन्ती मनाएको हो ।
प्राज्ञ तीर्थ श्रेष्ठले देशमा सबैको आ–आफ्नै सत्ता भएकाले सत्ताको सत्य जोगाउने जिम्मा तिनै जिम्मेवार व्यक्तिको भएको बताए । उनले नेपाली भाषा, साहित्य र सर्जकको उपेक्षा गरेर विदेशीको गुलामी संस्कार मोलाउनु दुःखद् भएको धारणा राखे ।
प्राज्ञ श्रेष्ठले मौरीले सुवास, झिँगाले फोहर दिने स्मरण गर्दै दुनियाँमा एउटै व्यक्तिले सबै दिन नसक्ने भएकाले केही झिँगाले भानुभक्तको योगदानको उपेक्षा गर्नु हास्यास्पद रहेको बताए ।
भानुभक्तको चिनारी प्रस्तुत गर्दै प्राडा रविलाल अधिकारीले भानुभक्तलाई राष्ट्रियताका प्रतीकका रुपमा चिनाए । बिम्ब कवि रमेश श्रेष्ठले भानुभक्त आचार्यले नेपाली भाषाको प्रचारप्रसार र महत्वमा भानुभक्तको योगदान अतुलनीय रहेको उल्लेख गरे ।
प्रतिष्ठानका कुलपति सूर्य खड्का बिखर्चीले प्रतिष्ठानले स्रष्टाको सम्मान जिउँदैमा गर्नुपर्ने मान्यतानुरुप आफ्ना कार्यक्रम तय गरेको बताए ।
प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको धुनमा कविता कार्यक्रममा ६ जिल्लाका कविले आफ्ना रोजा कविता सुनाएका थिए । कविता सुनाउने कविमा कास्कीका शिव त्रिपाठी, शंकरमणि त्रिपाठी, लक्ष्मी थापा, स्याङ्जाका डा. नारायणप्रसाद अधिकारी, सुदर्शन पौडेल, तनहुँका अम्बिकाप्रसाद भट्टराई, लमजुङका कुमार तामाङ, सरस्वती श्रेष्ठ सरु, गोरखाका लोकनाथ पुडासैनी र पर्वतका डा. जगन्नाथ रेग्मीले कवितावाचन गरेका थिए ।
कवितावाचनका क्रममा कलाकर्मी तथा संगीतकर्मी अम्मर राना मगर, युमिन गुरुङ र रोशन गुरुङले मुरली, मादल र सारंगीमा साथ दिए ।
कुलपति सूर्य खड्का बिखर्चीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उपकुलपति गोरे गुरुङले स्वागत गरे भने सदस्य सचिव मनकुमार श्रेष्ठले सञ्चालन गरेका थिए ।
यता, भानु वाङ्मय प्रतिष्ठान पोखराले भानुको प्रतिमामा माल्यार्पण तथा उनको योगदानको स्मरण गर्दै २०८ औं भानु जयन्ती मनाएको छ । पोखरा–११ फूलबारीस्थित आदिकवि भानुभक्त आचार्यको पूर्णकदको प्रतिमामा मंगलबार बिहान माल्यार्पण गर्दै जयन्ती मनाइएको हो ।
प्रतिष्ठानका अध्यक्ष सरुभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा सचिव अम्बिकाप्रसाद भट्टराई, डा. चैतन्य अधिकारी, भानु मार्ग आमा समूह क का अध्यक्ष मीठुदेवी गुरुङ, प्रतिष्ठानका सदस्य कृष्णप्रसाद बास्तोला, पद्मराज उदासी, धर्मराज पौडेल अल्पायु, साहित्यकार भीम रानाभाटलगायतले आदिकविको योगदानको स्मरण गरेका थिए ।
आदिकवि भानुभक्तको २०८ औं जन्मजयन्तीको अवसरमा भानु वाङ्मय प्रतिष्ठान पोखराले २०७१ सालमा भानुको पूर्णकदको प्रतिमा निर्माण गरेको थियो ।